कोरोना भाइरस: अर्थतन्त्रको ताजा तस्बिरले किन अर्थविद्हरूलाई आश्चर्यमा पार्‍यो:: Naya Nepal
चैतदेखि सुरु भएको लकडाउन अनि जनस्वास्थ्य सङ्कटको अवस्थाका माझ अर्थतन्त्रमा काफी चाप परिरहेको सबैले अनुभव गरेका छन्।
सात प्रतिशतमा वृद्धि हुने आशा गरिएको अर्थतन्त्रको वृद्धि दर शून्यको नजिक पुगिरहँदा केन्द्रीय ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणले भने कतिपय अर्थविद्लाई सोचमग्न बनाइदिएको छ।
कोरोनाभाइरस महामारीका कारण नेपालको अर्थतन्त्र निकै जोखिममा परेको अर्थविद्हरूले सुरुदेखि नै भन्दै आएका थिए।
लाखौँ युवा विदेशमा काम गर्ने र ती देशमा महामारी फैलिएमा या त उनीहरूको काम गुम्ने या उनीहरू ठूलो सङ्ख्यामा फर्कने चेतावनी दिइएका थिए।
महामारी सुरु भएदेखिनै विप्रेषण आप्रवाहलाई लिएर नेपालका नीतिनिर्माता तथा अर्थविद्हरूले चिन्ता जनाएका थिए।
तर साउनसम्म पनि यसको आप्रवाह बढिरहेको छ।
“शायद नेपालीहरू काम गर्ने देशहरूमा आर्थिक प्रभाव त्यति परेन होला अनि उनीहरूले ब्याङ्किङ् माध्यममार्फत् नै पैसा पठाउने बानी बढाए होला। त्यसैले विप्रेषणमा राम्रै स्थिति देखियो,” आचार्यले भने।
तर आउने दिनमा अझै पनि जनस्वास्थ्यका सङ्कट बाँकी नै छन्। फेरि लकडाउन नहोला पनि भन्न सकिन्न।
त्यसमाथि दशैँ तिहार ताका सरकारले कर्मचारीहरूलाई पेश्की तथा अन्य खर्चमा धेरै रकम पनि खर्चनुपर्नेछ जबकि राजस्वमा चाप परिरहेको छ।
साना तथा मझौला व्यवसायी तथा पर्यटन व्यवसायीहरूको हालत नाजुक नै छ।
यी पृष्ठभूमिका माझ आगामी दिन चुनौतीपूर्ण रहिरहनेमा भने अर्थविद्हरू एकमत छन्।
कार्यकर्तालाई नियमित भत्ता: कुन पार्टीका पूर्णकालीन कार्यकर्ता कसरी पालिन्छन्?
सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आफ्ना पूर्णकालीन कार्यकर्ताहरूलाई नियमित रूपमा आर्थिक सहायता अथवा भत्ता दिने कि नदिने भन्ने विषय सचिवालय बैठकको कार्यसूचीमा परेपछि पार्टीभित्रै र बाहिर त्यसको पक्ष र विपक्षमा आवाज उठ्न थालेका छन्।
तर कतिपयले स्रोत नै नखुलाई पार्टीले पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई भन्दै नियमित सहायता गर्नु भनेको मासिक तलब दिएजस्तो हुने भन्दै त्यसले अप्रत्यक्ष रूपमा सरकारी ‘ढुकुटीको दोहन’ हुने बताएका छन्।
ती अन्य पार्टीभित्र कार्यकर्तालाई दिने आर्थिक सहायताको व्यवस्था कस्तो छ र नेकपाभित्र चलेको बहसबारे उनीहरूको धारणा के छ?
“आफू वा आफ्नो परिवारको सदस्य लाभको पदमा नरहेका कार्यकर्तालाई नियमित तर तलबकै हिसाबले नभई साङ्केतिक रूपमा मोबाइल वा यातायात खर्च सहयोग गर्ने कि भन्ने विषयमा छलफल गर्न विषय उठान भएको हो। अबको दुई-तीन दिनमा त्यो विषयमा छलफल होला,” प्रवक्ता श्रेष्ठले बीबीसीसँग भने।
काङ्ग्रेसले कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिइँदा नै ‘तीन दिन पार्टीलाई, चार दिन रोटीलाई’ भनी आयआर्जन र जीविकोपार्जनको स्रोत खोज्न प्रोत्साहित गर्ने गरेकोले राजनीतिलाई विशुद्ध स्वयम्‌सेवाका रूपमा लिनुपर्ने बताएको छ।
उनले भने, “पार्टीका कार्यकर्तालाई पनि तलब सुविधा दिने गरेपछि त राजनीतिक दलभित्र कर्मचारीतन्त्र जस्तो भइहाल्छ। राजनीति भनेको भावनाले गर्ने हो त्यसलाई आम्दानी गर्ने थलो बनाउनु हुँदैन।”
“राजनीतिमा होलटाइम लाग्ने र अन्य कुनै पनि आयस्रोत नभएका मानिसको हकमा नियमित आर्थिक सहायता दिने विषयमा हाम्रो पार्टीभित्र आगामी दिनमा छलफल हुन्छ,” झाले बीबीसीसँग भने।
उनले भने, “हामी सबैजसो कार्यकर्तालाई विभिन्न किसिमका श्रम वा उद्यम गरेर आम्दानी गर्न प्रोत्साहित गर्छौँ। कतिपय हाम्रा पूर्णकालीन कार्यकर्ताको पनि कुनै आयआर्जनको बाटो छैन। उनीहरूको जीवन निर्वाह कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ अब पार्टी एक भएपछि छलफल चलाउछौँ।”
पार्टीको वाग्मती प्रदेश संयोजक समीक्षा बाँस्कोटाले भनिन्, “हाम्रो पार्टीमा चाहिँ आम्दानीको स्रोत भएकाहरू नै क्रियाशील हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ। पार्टीको आर्थिक स्रोत पनि सदस्यता लिए बापत, सद्भाव समूहमार्फत्‌ वा कसैले सहयोग गर्न चाहे त्यसरी उठ्ने हो। कुनै पनि सदस्यले पार्टीबाट केही आर्थिक सहायता पाउनुहुन्न। विशुद्ध स्वयम्‌सेवा हो।”
“अहिले केन्द्रीय सदस्य र पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई भनिएला। अनि पूर्णकालीन कार्यकर्ता केन्द्रीय स्तरमा मात्रै हुन्छन्? आर्थिक सहयोग स्वरूप भनेर रकम दिन थालिए स्थानीय तहसम्मका कार्यकर्तालाई राजनीति कमाई खाने भाँडो रहेछ भन्ने पर्छ,” खनालले भने।
“विश्वका कम्युनिस्ट देशबाहेक उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका कुनै पनि मुलुकमा राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्तालाई आर्थिक सहायता गर्ने भन्ने चलन हुँदैन,” राजनीतिशास्त्री खनालले भने, “राजनीति वा पार्टीका लागि गर्ने भनेको स्वयम्‌सेवी रोजाइ हो।”
पार्टीका कार्यकर्तालाई आर्थिक सहायता दिने भन्ने विषयमाथि सामाजिक सञ्जालमा पनि विरोध र व्यङ्ग्यका स्वरहरू व्यक्त भएका छन्।
ट्वीटर प्रयोगकर्ता शिवराज खत्रीले प्रश्न गरेका छन्, “दलले पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई मासिक भत्ता दिन्छौा भन्दा आर्थिक श्रोत पनि खुलाउनु पर्ने हैन र? दलहरूले कतै उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गरेको त सुनिएको छैन। कहाँबाट आउँछ यस्तो पैसा? विभिन्न तरिकाबाट राज्य स्रोत लुटेकै पैसा त होला हैन र?